Al-Shabaab oo weeraray saldhigyada Ciidamada Kenya ee degaannada Taabta & Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Al-Shabaab oo weeraray saldhigyada Ciidamada Kenya ee degaannada Taabta & Qooqaani ee...
Al-Shabaab oo weeraray saldhigyada Ciidamada Kenya ee degaannada Taabta & Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo degaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku dhex-maray ciidamada Kenya iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kaddib amrkii Al-Shabaab ay weerareen saldhigyada Ciidamada Kenya ee degaannada Taabta & Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo geystay khasaaro kala duwan.
Al-Shabaab oo sheegtay weerarkaas ayaa sheegay inay xaly Saqdhii dhexe weerareen saldhigyada Ciidamada Kenya ee degaannada Taabta & Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose, isla markaana weeraradaas ay khasaaro ku gaarsiiyeen Al-Shabaab.
xubna ka tirsan Ciidamada Jubbaland ayaa waxaa ay sheegeen in weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen degaannada Taabta & Qooqaani ee Gobolka Jubbada Hoose uu jiro, isla markaana Ciidamada Kenya & kuwa Jubbaland ay iska difaaceen.
Saraakiisha Ciidamada Kenya oo ka tirsan AMISOM weli kama hadlin weerarkaas & sheegashada Al-Shabaab ee ku aadan inay khasaaro ku gaarsiiyeen Ciidamo ka tirsan Kenya, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan.
Previous articleMadaxweynaha Dowlada gobolka Tigray oo ku baaqay xabad joojin
Next articleAfhayeenka TPLF oo Sheegay in ay so rideen diyaarad duqayn rabtay meelo u dhaw Maqale
Madaxweynahii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed laba jeer buu isaga daba noqday Magaalada Jowhar ee Caasimada KMG ah ee Hirshabele. isaga oo xooga saarayey...